Suaalo laga keenay Qaabkii loo dilay 4 Qof oo shalay Booliska ku toogteen Suuqa Bakaaraha [Akhriso] -News and information about Somalia
Home News Suaalo laga keenay Qaabkii loo dilay 4 Qof oo shalay Booliska ku...
Suaalo laga keenay Qaabkii loo dilay 4 Qof oo shalay Booliska ku toogteen Suuqa Bakaaraha [Akhriso]
Suaalo badan ayaa ka dhashay afar qof oo shalay ay Ciidamada Booliska ku dileen Suuqa Bakaaraha markii ay ku eedeeyeen inay qorsheynayeen dilka Agaasime ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaliya.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Somalia iyo Suxufi hore Yuusuf Garaad oo ka mida dadka dooda ka keenay qaabka ciidamada Booliska dil wadareedka u fuliyeen ayaa sheegay in Dilkii shalay ka dhacay Bakaaraha uu ahaa mid khaldan oo ugu yaraan saddex waxyaabood oo culculus oo qaarkood ay u baahan yihiin baaritaan ay ku jiraan.
Wuxuu intaas ku daray in Booliska looga baahan yahay inuu hubiyo in fal dembiyeed uu dhacay iyo in kale, iyadoo ay xaaladu noqon karto xog la dayacay, wuxuuna soo qaatay qodobadda khaladka ah ee falkaasi ku jiray iyo su;aaha ka taagan oo kala ah:
1- Qof aan Maxakamadi xukumin waxaa la dili karaa marka uu fal naf goyn kara faraha kula jiro, si kale oo looga badbaadaana aanay jirin. Waa marka uu isagu xabbad ridayo ama uu rid is leeyahay ee lagala hor maro. Intaas oo ruux oo qof dumar ahi ku jirto ma ku dhinteen si sharciga waafaqsan?
2- Tan labaad, waa xadgudub waana foolxumo in meyd dariiqa la soo dhigo, haddana la sawiro oo baraha bulshada lagu faafiyo. Dariiqa iyo baraha bulshada waxaa labadaba jooga carruur iyo dad waaweyn oo aan xammili karin ama aan dooneyn muuqaalka dad la dilay oo waddada la dhigay. Mana aha dhaqan Dowladeed.
3- Tan saddexaad, ma aheyn in magaciisa la sheego Agaasimaha lagu tilmaamay in si isaga loo difaaco darteed loo dilay intaas oo qof. Ma ahan dhaqan heyado amni oo Dowladeed, sababta oo ah isaga ayay halis hor gelin kartaa sheegidda magaciisu.
Waan garan karaa in ciidanka amniga ay saaran yihiin laba culeys: Shabaab oo Dowladda, ciidanka iyo shacabkaba weerar ku ah. Iyo shacabka oo dhaliil la daba taagan ciidanka. Taasi qiil uma siineyso in caro ay u qabaan Shabaab ay ka baxaan xadka sharciga. Muwaaddinka Soomaaliyeed sharaftiisa iyo karamaadiisa waa in la dhowraa nolol iyo geeriba.
Previous articleXog Xasaasi ah oo laga helay wararka sheegaya geerida Cali Dheere & Sababta
Next articleXOG: Fakashada Axmed Madoobe Iyo Fashilka Nabad & Nolol (Qorsheyaal Cusub)